Erdogan:- Madaxweynaha Masar sharci darro ayuu gacmaha kula jiraa | Gaaroodi News
Erdogan:- Madaxweynaha Masar sharci darro ayuu gacmaha kula jiraa
Madaxeweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul u cambaareeyay Masar iyo Imaaraadka Carabta oo labaduba taageeraya xoogagga ku sugan bariga Liibiya.
Waxay arrintani ka dambeysay markii uu madaxweynaha Masar Cabdifitaax el Sisi uu isbuucan la kulmay hoggaamiyayaasha qabaa’illada bariga Liibiya oo ka dalabday Qaahiro inay soo farageliso dagaalka.
Liibiya waxaa halakeeyay colaad daba dheeraatay tan iyo sanaddii 2011 markaas oo hoggaamiyihii muddada dheer ka talinayay dalkaasi Mucamar Qadaafi xukunka looga tuuray howlgal ay ku luglahayd gaashaanbuurta NATO. Janaraal Haftar
Maleeshiyaadka Jeneraal Haftar ayaa isku dayaya in ay la wareegaan gacan ku heynta caasimadda Tripoli.
“Taariikhda ayaa sheegi doonta cid kasta oo gacan ka geysatay in dalka Liibiya uu ku daato diig ee caawinayey xoogagga fallaagada Xaftar,” ayuu yiri Erdogan.
Doorka Saliida ee colaadda
Madaxweyne Erdogan wuxuu beesha caalamka ugu baaqay inay joojiyaan saliidda ay sida sharci darrada ah uga iibsadaan Khaliifa Xaftar.
“Marnaba shacabka Liibiya ee aan walaalaha nahay kuma fiirsaneyno kooxaha fallaagada iyo calooshood u shaqeystayaasha ah,” ayuu yiri.
“Waxaan Turkiga uga mahadcelineynaa sida geesinimada leh ee ay u garab istaageen Liibiya,” ayuu yiri Ra’isal wasaaraha Liibiya taariikhda Fayez al Sarraj.
Turkiga iyo Dowladda caalamka laga aqoonsan yahay ee Liibiya waxay bishii November ee sanadkii hore saxiixeen iskaashi heshiis oo ku saabsan dhinaca badda, heshiiskaasi oo Turkiga awood u siinayo in badda Mediterranean-ka ay ka sahmiso ayna ka soo saarto saliid, hase ahaateen waxaa heshiiskaas diiday dalka Giriigga iyo waddamo kale.
Wixii heshiiskaasi ka dameeyeyna Turkiga wuxuu ciidammo iyo saanado militari u diray Tripoli si ay dowladda Liibiya uga caawiyaan in xoogagga xaftar ay ka saaraan qeybihii ay ka joogeen magaalada Tripoli.
Tani iyo 2015-kii dalka Liibiya wuxuu u qaybsanaa laba dowladood oo bari iyo galbeed ah. Xaftar ayaa fadhiisimo ka dhigtay bariga dalka halka dowladda Liibiya ka arrimisana ay gacanta ku haysa galbeedka dalkaasi